“Naasaha Ayaan Iska Jaray Si Aan Nolosheyda U Badbaadiyo” – somalilandtoday.com
“Naasaha Ayaan Iska Jaray Si Aan Nolosheyda U Badbaadiyo”
(SLT-Hargeysa)-Markii ay 23 jirka ahayd ayey ogaatay in boqolkiiba 85 ay halis ugu jirto kansarka naasaha ku dhaca.
Sababtu waxay tahay in jidhkeeda uu ku jiray hidde-side loo garanayo BRCA1, kaas oo ka dhasha kansar ku dhaca halkii qof ee ka mid ah 300 illaa 400 oo qof.
“Aabahey hooyadii, waxay u dhimatay kansarka naasaha. Xilligaa aabe wuxuu ahaa sideed sano jir”.
“Waxaan koray anigoo arrintaa og, balse fikrad kama haysan in la iska dhaxlo illaa eedadeey uu ku dhacay kansarka naasaha, sannadkii 2013-kii”.
“Si xasillooni dhanka maskaxda ah aan u helo, waxaan go’aansaday in baaritaan la igu sameeyo si aan u arko isbedelka hide-sidaha BRCA. In ay shalay ahayd bay ila tahay, anigoo fadhiya cisbitaalka oo walwalsan, hooyo iyo aabe na ay ila socdeen. Waxaan sugeynay natiijada”.
“Markii dhaqtarka ay soo baxday, waxayna geysay xafiiskeeda, waan ogaa in war fiican aysan sidin. Halkaas ayaan go’aan ku gaaray, waxaanna doonayay in naasaha la iga jaro (taa oo dhaqaatiirtu ku tilmaameen laba qalliin oo ka hor tag ah)”.
“Waxaan lahaa naaso waaweyn, waana dhab, waxay astaan u ahaayeen inaan dumar ahay, waana jeclaa. Waa iska naaso, waana ogaa in nolosheyda ay badbaadeyso haddii aan iska gooyo.”
“Maskaxdeyda waxaa markasta ku jirtay inaan nolol hore isaga jiro oo caruurteyda aan nuujiyo, halkii aan caruurtayda dhigi lahaa hooyo la’aan”.
“Ka dib fikir badan iyo ballamo cisbitaal oo aanan tagin, ugu dambeyn waxaan go’aansaday in laba qalliin la igu sameeyo, 13 February 2019, xilligaas oo aan 27-jir ahaa.”
“In kastoo dadka ay si joogto ah ii weydiinayeen inaan ka baqayo qalliinka, aniga caadi ayaan iska ahaa illaa aan hooyo iyo aabe dhunkaday oo aan ku iri macsalaama, ka dibna sii aaday qolka qalliinka. Waan jareynayay, waxaanna billaabay inaan ooyo. Si la ii dejiyo, dhaqtarka wuxuu isiiyay dawada hurdada. Dhab ahaantii, wuu ku mahadsan yahay in aan hurdo.”
“Labadii maalmood ee ugu horreeyay ee qalliinka ka dib, waa kuwii iigu xumaa: Hooyo ayaa wax kasta ii sameyneysay, sida in ay dharka iga badasho, i seexiso ama i toosiso – ceebbey ila ahayd”.
“Balse ugu dambeyn, aniga baa wax kasta sameysanayay. Laba isbuuc ayaan kaniin xanuun baabi’iye ah isticmaalayay. Naaso qurux badan ayaan yeeshay! cabsideydu waxay ahayd in ay aad u yaraadeen. Laba wareeg oo isla eg ayaan yeeshay oo ku wareegsanaa ibta. Mararka qaar waan ilaawayay in qalliin la igu sameeyay”.
“Waxaan dareemayaa in la qabtay shaqo nolosheyda lagu badbaadiyay”.
“Waxaan saaxiib la ahay dumar kale oo 27 illaa 40 ay da’dooda u dhexeyso oo halis ugu jira kansarka naasaha.”
“Qaar ka mid ah caruur bay leeyihiin, qaarna weli caruur maysan dhalin. Kuwa kale saaxiibbo bay leeyihiin, kuwana malahan. Waxaan u sheegaa in cabsidii ay iga yaraatay”.